Hydroponic Herb Garden လမ်းညွှန် - နှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးပါ - ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ
Hydroponic Herb ဥယျာဉ်လမ်းညွှန်
အဆင့် ၁ - ရေချိုးပြီးတိပ်ခွေ
အဆင့်2- လေပေါ်မှာသုတ်ဆေး Tote
အဆင့် ၃ - တွင်းများကိုတူးပါ
အဆင့် ၄ - Air System ကို Install လုပ်ပြီးရေထည့်ပါ
အဆင့် ၅ - pH နှင့် Nutrients Add
အဆင့် ၆ - တိုးတက်သောမီဒီယာနှင့်အပင်များကိုထည့်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများတွင်သင်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းအလောင်းအစားရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်စိတ်ကူးနိုင်သည့်မည်သည့်ပန်းကိုမဆိုအရသာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပြaနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့သောအပင်များကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်မျိုးဖြင့်အခြေချကြသည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်အရာရာတိုင်းကိုမသုံးခင်မှာမကောင်းဘူး
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကုန်စုံသို့မဟုတ်လယ်သမားစျေးကွက်မှ ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သူတို့သည်သင့်ကိုကုန်ကျမည် ။ လတ်ဆတ်သောအော်ဂဲနစ်ပင်စည်၏ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာသည်ကုန်စုံဆိုင်အများစုတွင်ဒေါ်လာ ၃.၉၉ အထိကုန်ကျနိုင်သည်။ အခြားလူကြိုက်များသောအော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သော chives၊ စမုန်ဖြူ၊ Rosemary နှင့် oregano အားလုံးသည်အတူတူပင်ကုန်ကျသည်။
စျေးတစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အထူးဆန်းဆုံးတစ်ခုမှာသူတို့၏ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များရောင်းချသောကုမ္ပဏီအားလုံးနီးပါးသည်ပလတ်စတစ်တစ်ခါသုံးထုပ်ပိုးမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ငါဒီမှာရှိနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအော်ဂဲနစ်ကို ၀ ယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့အစားအစာကြီးထွားဖို့နဲ့စားသုံးဖို့အတွက်ပိုပြီးသဘာဝကျတဲ့နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ ပလပ်စတစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဲနစ်အစားအစာနှင့်အလွန်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
သင်သည်အော်ဂဲနစ်ကိုမဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင် ပို၍ စျေးနှုန်းချိုသာစွာပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်သည်ဆေးပင်များ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့တစ်ထိုင်တည်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အများမစားသောကြောင့်, အရသာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စေရန်အရသာရှိရှိအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေတွင်မစိုက်ပျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ၀ ယ်ခြင်းသည်သင်၏ဟင်းလျာများ၏အရသာကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
သင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များရှိပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်လော သင်ကံကောင်းပါစေ - ဒီလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ဤတွင် Cottage, Home နှင့် Gardening တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကြီးထွားလာသောအပင်များကိုလွယ်ကူသော၊ တတ်နိုင်သော၊ ထူးခြားသောနည်းများဖြင့်အာရုံစိုက်လိုသည်။
ငါအတူတူထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အသေးစား Hydroponic ပျိုးပင်ဥယျာဉ် သင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များရှိနိုင်သော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုမသိလိုသူအားလုံးအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်၏ရည်မှန်းချက်မှာအိမ်တွင်းတိုးတက်မှုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဥယျာဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးပေါပြီးလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
မျိုးစေ့မှအပင်ပေါက်ရန်၊ ရိတ်ရန်အထိငါသည်သင်တို့ကိုလမ်းတစ်ခုသင်ပေးမည် ရှင်သန်ကြီးထွားစေသော Hydroponic herb ဥယျာဉ်ကိုတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းရန် -fသို့မဟုတ်အခမဲ့!
ဤဥယျာဉ်သည်အပင်ရှစ်မျိုးကိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ယင်းကိုတိုးချဲ့လိုပါကထိုသို့ပြုလုပ်ရန်လွတ်လပ်မှုရှိသည် - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုမိုစိုက်ပျိုးရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အပင်ရှစ်မျိုးကသင့်အားအမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးရန်ခွင့်ပြုသည်။ Basil, ပညာရှိ, oregano, သမင်, parsley, chives, tarragon နှင့် cilantro လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များအကြားရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မဆိုနည်းလမ်းအားဖြင့်မဖြစ်မနေမရှိကြပေ။
နေသမျှကာလပတ်လုံးကကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားမှကြီးထွားလာသောပျိုးပင်မဟုတ်သကဲ့သို့သင်၏ဥယျာဉ်၌သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကိုစိုက်။ စျေးဝယ်စာရင်းတစ်ခုလုံးသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်နေရာသို့ရောက်သည်ပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၈၀ ခန့်ရှိသည်။
သင်၏ဥယျာဉ်မှထွက်ရန်ငွေများစွာလိုသော်လည်းထင်ရပေမည်။ သင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရိတ်သိမ်းလိမ့်မည်။ ပင်စည်တစ်ခုတည်းတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀ ခန့်ကိုစုဆောင်းနေပါသည်။
pH ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Kit
အထွေထွေ Hydroponics FloraGro
ပျိုးပင်မျိုးစေ့များ / ပျိုးပင်များ
စုစုပေါင်းစျေးနှုန်း: ~ $ 76,50
စုစုပေါင်းဈေးနှုန်းနှင့်မပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများ - ~ $ 90
တည်နေရာ: အမေဇုံ / Home သိုလှောင်ရုံ
ရေနှင့်အာဟာရအရောအနှောများကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်တစ်မျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။ ရေလှောင်ကန်ထဲသို့ ၀ င်သောမည်သည့်အလင်းမဆိုရေညှိကြီးထွားမှုကိုအားပေးရန်အလားအလာရှိသောကြောင့်ဤသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရေးကြီးသည်။ ရေညှိများလွန်းခြင်းသည်သူတို့စုပ်ယူနိုင်သောအာဟာရပမာဏကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အမြစ်စနစ်များကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ အလင်းရောင်များလွန်းခြင်းကြောင့်ရေလှောင်ကန်ကိုနွေးစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံကိုနှောင့်နှေးစေသည်။
သင်လုံးဝဆိုးရွားသောတုတ်ပြားကိုသင်မတွေ့ပါကသင်သည်မှုန်ရေမွှားဆေးဘူးတစ်ဘူးကိုကောက်လိုပေမည်။ အမည်းရောင်ဟာနေရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးရေလှောင်ကန်ကိုအပူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမီးခိုးရောင်အရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဥယျာဉ်တွင်မီးခိုးရောင်တောင်မှအလွန်အကျွံအပူကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ အလင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အဖြူရောင်ရေမှုန်ရေမွှားဆေးဝယ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။
တည်နေရာ: အမေဇုံ / ငါးမွေးမြူရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
ရေလှောင်ကန်တစ်လျှောက်တွင်လေပူဖောင်းငယ်များကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေရန်အတွက်ကျောက်တုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်တွေရဲ့အမြစ်တွေဟာမြေဆီလွှာအစားရေထဲမှာထိုင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့ကအောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်ရရှိနိုင်တယ်။ လေပူဖောင်းများသည်ရေကိုအောက်ဆီဂျင် ပေး၍ မည်သည့်အကျိုးဆက်များမျှမပါဘဲအမြစ်ကိုနစ်မြုပ်စေသည်။ ငါပတ်ပတ်လည်လေထုကျောက်ခဲကြိုက်နှစ်သက် - သူတို့သည် 12 'အရှည်မော်ဒယ်များထက်အများကြီးပိုကောင်းသင့်ရဲ့ရေလှောင်ကန်၏အောက်ခြေတွင်လုံခြုံနေဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေစုပ်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဟာရရောစပ်မှုကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အာဟာရရောစပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်လေကောင်းလေသန့်မရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အမြစ်များရေနစ်လိမ့်မည်။ ၄ င်း Hydroponic တည်ဆောက်မှုတွင်အမြစ်များသည်အောက်ဆီဂျင်ကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ရေတွင်အပြည့်အဝနစ်မြုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ကဖန်စီစုပ်စက်မလိုအပ်ပါဘူး - အသေးငယ်ဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးလေစုပ်စက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ငါဒေသခံ Petco မှာရှာတွေ့စျေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်တယ်။
သင့်ရဲ့ pump ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ airstone နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင်လိုအပ်ပါတယ်။ အထုပ်အများစုသည်သင်၏ဥယျာဉ်အတွက်လုံလောက်သောထက်များသည့် ၈ ပတ်ပတ်လည်ပြွန်တစ်ခုရှိသည်။ လေကြောင်းလိုင်းတွင်ရေညှိများစုပုံလာခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အနက်ရောင်ပြွန်တစ်ထည်ကိုသေချာစွာဖမ်းယူပါ။ သင်ရေညှိများရရှိပါကလေကြောင်းလိုင်းသည်သင်၏အပင်များကိုသူတို့ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်အောက်စီဂျင်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးငတ်စေနိုင်သည်။
။ တည်နေရာ: အမေဇုံ / ငါးမွေးမြူရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
ဤအရာသည်သင်၏လေကြောင်းပြွန်ကိုချထားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လေလှောင်ကန်သည်သင်၏သိုလှောင်ကန်အောက်ခြေတွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်။ ငါကဤကိုအသုံးမပြုဘဲအတိတ်တွင်ဤတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အလွန်ကောင်းစွာထွက်အလုပ်လုပ်ပါဘူး။ အဆိုပါ airstone ကျော်လှန်ခြင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တဝိုက် float လေ့, လေပူဖောင်း၏မညီမညာဖြစ်နေသောစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပူဖောင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်တွေရေနစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ pH စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိအာဟာရရောသော pH ၏မှန်ကန်သောအဆင့်တွင်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ မှန်ကန်သော pH မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အာဟာရဓာတ်များကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်စုပ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုံပိုင်ရေအများစုသည် pH 7.0-8.0 ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပင်များသည် pH 6.0-6.5 ရှိသည်။ ဤသည်သည်ငါတို့ဥယျာဉ်အတွက်လိုအပ်သောအရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
။ တည်နေရာ: အမေဇုံ / Hydroponics စတိုး
လုံလောက်သောအာဟာရမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အပင်များသည်ငတ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြစ်များမှတစ်ဆင့်စုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အာဟာရရှိသောအဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရေထဲသို့သင့်လျော်သောပမာဏနှင့်ရောထွေးရန်လိုအပ်သည်။ အစပြုသူများအနေဖြင့် General Hydroponic Flora Gro သည် အစပြု၍ အကောင်းဆုံးအာဟာရဖြစ်သည်။ ငါတို့ဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကြီးထွားလာနေလို့ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အာဟာရတွေပဲလိုအပ်တယ်။ ငါတို့ခါးသီးအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေကိုမပွင့်စေချင်ဘူး။ ဤသည် hydroponic ပျိုးပင်ဥယျာဉ်ကိုအလွန်ကုန်ကျ - ထိရောက်သောစေသည်။
ဤရွေ့ကားငါတို့တူးသောတွင်းထဲမှာအားမရပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်အပင်များကိုအရိပ်ထဲတွင်ထားရှိခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာသည့်အလတ်စားနှင့်ပေါင်းစပ်။ မြစ်များကိုသိုလှောင်ရာသို့သွားသောအခါအမြစ်တွယ်နေသောအရာတစ်ခုခုကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်သည်၎င်းကိုမည်သည့် Hydroponics စတိုး၌မဆိုရှာနိုင်သည်သို့မဟုတ်ငါးငါးချောင်းနှင့်အမေဇုံတွင် ၁၀ ဗူးဝယ်နိုင်သည်။
။ တည်နေရာ: အမေဇုံ , Aquarium စတိုး၊ Hydroponics စတိုး
သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အရင်းအမြစ်စနစ်များသည်အာဟာရသိုလှောင်ကန်ထဲသို့မဝင်မီဖမ်းယူရန်တစ်ခုခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဈေးအပေါဆုံးသောရွေးချယ်စရာမှာမည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်အရောင်းဆိုင်တွင်မဆိုငါးမွေးကျောက်စရစ်ခဲဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အလယ်အလတ်ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်အသုံးပြုလိုတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့မီဒီယာကိုခံစားဖို့ငါ့ရဲ့ Hydroponic media လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
* ပုံ : Hydroton Expanded ရွှံ့စေးလုံး
နောက်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည် - အပင်များ! သင်သည်သင်၏ပျိုးပင်ဥယျာဉ်ကိုမျိုးစေ့မှ အစပြု၍ စတင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသတွင်းသိုလှောင်ရုံသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်စင်တာမှပျိုးပင်အချို့ကိုစတင်ဝယ်လိုခြင်းရှိမရှိသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ငါကနှစ် ဦး စလုံးနည်းလမ်းတွေပြုမိပါပြီ။ မျိုးစေ့မှစတင်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်စျေးသက်သက်သာသာသာရှိသောကြောင့်မျိုးစေ့အစုတစ်စု၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ပျိုးပင်တစ်ပင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အချို့ကသင်၏ဥယျာဉ်ကို ဦး စွာစတင်ချင်ပေမည်။ မင်းအတွက်မင်းအတွက်ပျိုးပင်တွေသွားစရာလမ်းရှိတယ်။ သင်၏ Hydroponic system ကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်ဖွယ်ရာတစ်ခုရှိသည်။
optional ကို:2Bit Bit / w Hole Saw
။ တည်နေရာ: အမေဇုံ သို့မဟုတ်အိမ်သိုလှောင်ရုံ
၎င်းသည် optional ဖြစ်သည်။ သင်သည် ၂ လက်မအချင်းရှိသောအပေါက်များကိုအတိအကျဓားသို့မဟုတ်ကတ်ကြေးဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်။ ငါကအပေါက်မြင်တာကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်။ ရှေ့ပြေးနည်းနည်းတစ်ခုနှင့် ၂ လက်မအရွယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြင့် ၅ မိနစ်ထက်နည်းသောအပေါက် ၂ ခု” ထွက်နိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ပြီးဓားပတ်ပတ်လည်၌သင်၏လမ်းကိုမသိလျှင်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။
ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိရေညှိများရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်သေးပါကသင်၏တုတ်ဆေးသုတ်ရန်သင်ရေဖြန်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဆေးသုတ်ခြင်းမပြုမီတုတ်သည်perfectlyုံသန့်ရှင်းရမည်။ ချောမွေ့ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပြင်ရရှိရန်သေချာစွာဆေးကြောပြီးခြောက်အောင်သေချာပါစေ။
သင်၏တုတ်အခြောက်ခံသည်နှင့်တပြိုင်နက်အသားတင်အိုးတလုံးကိုယူပြီး၎င်း၏အလယ်နှင့်အပြိုင်ထားပါ။ အိုးတလုံး၏အောက်ခြေတွင်သင်၏တုတ်ပေါ်တွင်အမှတ်အသားပြုပါ - ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရေမျဉ်းဖြစ်သည်။
တိပ်ခွေနှင့်တိပ်ခွေကိုအမှတ်အသားမှအောက်တုတ်သို့ယူပါ။ ကျနော်တို့ရေမှုန်ရေမွှားပြီးနောက်ကျနော်တို့ပြီးပြည့်စုံသောရေမျက်နှာပြင် gauge ထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒီချွတ်ကိုပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ။ ဤအင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်ကိုသင်လိုချင်သည်။ မင်းမရှိရင်မင်းရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရှင်သန်လာတာနဲ့အမျှသင့်ရေပမာဏကိုစစ်ဆေးဖို့ထိပ်ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သတင်းစာ (သို့) စက္ကူအဟောင်းတွေချပြီးအိတ်ကပ်ကိုတင်လိုက်ပါ။ ထိပ်တင်းကျပ်စွာဆွဲထားကြ၏သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အောက်ခံမှ လွဲ၍ အမှုန်အမွှားများသုတ်ဆေးသုတ်ဆေးသုတ်ဆေးကို သုံး၍ အပေါ်ဘက်ခြမ်းနှင့်အနားအားလုံးအားဖုံးအုပ်ရန်အလင်းရောင်မှုန်ရေမွှားသုတ်ဆေးဖြင့်ကပ်ပါ။
ဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်တစ်ဖက်စီကိုလေးလံသောအင်္ကျီတစ်ထည်ပေးပါ။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သမျှအလင်းအဖြစ်နည်းနည်းရေလှောင်ကန်ကိုထိုးဖောက်သေချာအောင်ချင်တယ်။ ၄၅ မိနစ်ကြာခြောက်အောင်ထားပါ
ဆေးသုတ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏ပိုက်ကွန်ကိုယူပြီးသင်၏တုတ်အဖုံးတွင်ချိန်ပါ။ သူတို့ကိုသင်အညီအမျှနေရာချကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဒီဇိုင်းတွင်အပိုအိုး (၆) ခုထည့်ရန်အခန်းမှထွက်ခွာလိုသောကြောင့်ပိုက်ကွန် (၈) လုံးနှင့်တွဲနေပါကသင့်အားနေရာချပေးနိုင်သည်။
သင် layout ကိုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် X ပုံစံ ၂ ခုပါရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင် ၂ ခု” အပေါက် ၂ ခုကိုအဖုံးထဲသို့စတင်တူးပါ။ ပလတ်စတစ်အပိုများအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်သေချာစေပါ၊ သို့မှသာသင်သည်အပျက်အစီးများမရှိသောတွင်းများ၌ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်မည်။
သင်၏အစွန်းအကွက်အောက်ပိုင်းရှိသင်၏ 1/8” လေကြောင်းလိုင်းပြွန်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသောအပေါက်တစ်ခုကိုတူးပါ။ ဒါကလေကြောင်းလိုင်းအပေါက်ပေါက်ပါလိမ့်မယ် ဤအပေါက်သည်သင်၏ရေလိုင်းအထက်တွင်တူးရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ်သင်အဆက်မပြတ်ယိုစိမ့်မှုနှင့်သင်၏ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိလုံလောက်သောရေပမာဏကိုဘယ်တော့မျှထိန်းသိမ်းထားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်လေကြောင်းလိုင်းကိုသင်တူးထားသောတွင်းတတွင်းကိုကျွေးပါ။ သင်၏စုစုပေါင်း၏ဘေးနှင့်အောက်ဘက်ရှိစုတ်ယူခြင်းခွက်ကို သုံး၍ လေကြောင်းလိုင်းကိုလုံခြုံစေရန်နှင့်လေထုကျောက်တုံးကိုအိတ်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် 15 quart တုတ်ကိုသင်ဝယ်ယူပါကရေလှောင်ကန်ထဲသို့ဖြည့်ရန်ရေ 2.5 ဂါလံခန့်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ရေလှောင်ကန်သည်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုပင်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာဟာရဓာတ်ဖြည့်စွက်ချက်ကိုထည့်သောအခါ၎င်းနံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
အခုဆိုရင်ငါတို့ရေလှောင်ကန်ကိုဆောက်ပြီးရေနဲ့ဖြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ရေကို pH ပြီးအာဟာရတွေထည့်ပေးရမယ်။ ဘုံပိုင်ရေအများစုသည် ၇.၀-၈.၀ အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ သင်ကြီးထွားလာမည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် pH ၆.၀ မှ ၆.၅.၅ အကွာအဝေးရှိ pH လိုအပ်သောကြောင့်ရေအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ အပေါ်ပုံတွင် ၇.၀ မှ ၈.၀ အကွာအဝေးရှိပျမ်းမျှရေချိုများ၏သစ်တောအစိမ်းရောင်ကိုပြသထားသည်။
pH ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးစေသောကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို၎င်းကိုမယူမိရန်သေချာစေပါ။ ရေကိုချိန်ညှိရန်သင်မလိုအပ်ဘဲ - အနည်းငယ်ပေါက်ရန်ကြိုးစားပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရေထဲသို့ရောထွေးပြီးတော့ထပ်မံစမ်းသပ်ပါ။ အစင်းပေါ်ရှိအရောင်သည်ညာဘက်ရှိပုံနှင့်တူသော ၆.၀-၆.၅ အကွာအဝေးနှင့်ကိုက်ညီပါကအာဟာရများကိုရောရန်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
အရောင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည် - စိတ်ပျက်စရာမဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါ။ ဤသည်သည်သင်၏အပင်များတက်ကြွစွာကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သည့်အာဟာရဓာတ်အားလုံးရရှိရန်သေချာစေရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ pH ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မပြုပြင်ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အပင်တွေရဲ့အမြစ်ကိုအချို့သောအာဟာရဓာတ်များစုပ်ယူခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။ pH သည်အာဟာရစားသုံးမှုနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ ။
အခုရေလှောင်ကန်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ရေဘယ်လောက်မှတ်မိနေပြီလဲ။ သင့်ပုလင်း၏နောက်ဖက်ရှိအထွေထွေ Hydroponics FloraGro ရှိအာဟာရရောစပ်ခြင်းဇယားကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏စနစ်ထဲသို့ရောထွေးရမည့်ပမာဏအတိအကျကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်သည်မျိုးစေ့သို့မဟုတ်ရှမှစတင်လျှင်၊ p Tsp / gallon ကိုသုံးပါ။ သင်ဥယျာဉ်မှစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှသင်ဝယ်ယူပြီးသောအပင်များမှစတင်လျှင် 1 Tsp / gallon ကိုသုံးပါ။
ကျွန်ုပ်၏စံပြစနစ်တွင်ရေလှောင်ကန်ထဲသို့ရေ ၂.၅ ဂါလံထည့်ပြီးဒေသတွင်းသိုလှောင်ရုံမှအစပြုလိုက်သောအပင်အချို့ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သိုလှောင်ကန်ထဲသို့အာဟာရ ၂ ½ပိုထည့်ပေးခဲ့သည်။
သငျသညျအမြိုးအနှယျမှစတင်ပေမယ့်အစားအချို့သောပျိုးပင်ပျိုးပင်ရဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, သင်အမြစ်စနစ်များကနေဖုန်ဆေးကြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သင်၏သိုလှောင်ကန်အတွင်းရှိမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်အပင်တစ်ပင်ကိုတတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဖြင့်စတင်ချင်ပါသည်။
သင်၏အပင်မှဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးပျက်စီးစေရန်သတိထားပါ။ ဘယ်ဘက်သို့ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသန့်ရှင်းနေလျှင်သင် ဆက်၍ သင်၏ပိုက်ကွန်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
ပိုက်ကွန်ထဲရှိကွက်လပ်များကို ဖြတ်၍ သင်ဆွဲဆောင်နိုင်သောအမြစ်ရှည်များရှိပါကထိုအရာကိုသွားပါ။ ၎င်းသည်အမြစ်စနစ်ကိုရေထဲသို့အလျင်အမြန်ထိရောက်စွာစီးဆင်းစေပြီးအာဟာရကြွယ်ဝသောရေချိုးခြင်းတွင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ မရရှိလျှင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ ကျန် root system ကိုသင်၏ကြီးထွားလာနေသောမီဒီယာနှင့်ဖုံးအုပ်ပြီးကျန်သောအပင်များကိုစိုက်ပါ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ယခုသင်ဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Hydroponic ပျိုးပင်ဥယျာဉ်ကိုဂုဏ်ယူစွာပိုင်ဆိုင်သူပါ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှမလုပ်နိုင်ပါ။
ဤတွင် Hydroponic ပတ်ဝန်းကျင်၌ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါထိပ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးငါးခုစာရင်းပြုစုပါတယ်။ ငါဖြတ်တောက်ခြင်းမှလာရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပူစီနံသို့မဟုတ် tarragon စိုက်ပျိုးသတိထားဖြစ်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်လိုလျှင်သင်ပျိုးပင်ဝယ်နိုင်သည် - သင်မှတက်ပဲ! သင်သည်သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားအပြည့်အဝကြီးထွားလာရန်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အချိန်ကိုသင့်အားစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန်ဤဇယားကိုရေးခဲ့သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Hydroponically စိုက်ပျိုးသောအပင်များသည်သူတို့၏မြေဆီလွှာများထက်များစွာပိုမိုမြန်ဆန်စွာရင့်ကျက်သောကြောင့်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကာလအနည်းငယ်မျှမြန်ဆန်လာပါကကျွန်ုပ်မအံ့သြသင့်ပါ။
မြေဆီလွှာ ph နှင့်အာဟာရရရှိမှုဇယား
ဘာလီ 5-10 ရက် ၈ ပတ် ၅ ပတ်
Chives ၁၅-၂၁ ရက် 12-16 ရက်သတ္တပတ် ၁၁ ပတ်
Oregano 8-14 ရက် ၆ ပတ် ၆ ပတ်
စမုန်ဖြူ ရက်ပေါင်း 8-20 ၆-၈ ပတ် 4-6 ပတ်
ပညာရှိ 10-21 ရက် ၈ ပတ် 4-6 ပတ်
အဖြစ် 12-16 ရက် ဖြတ်တောက်ခြင်း ၄ ပတ်
လေပြေ 10-14 ရက် ဖြတ်တောက်ခြင်း ၇ ပတ်
Marjoram 8-14 ရက် ၆ ပတ် ၂-၄ ပတ်
ကျွန်တော့်ရဲ့စံပြဥယျာဉ်မှာ Sweet Basil, German Thyme, Greek Oregano, Common Sage နဲ့ Cilantro တို့ကိုငါစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး၊ ငါရှိသမျှသောအချိန်များတွင်သုံးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုနှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။
သင် Hydroponic ဥယျာဉ်မှအသစ်ဖြစ်လျှင်ငါကဤဆေးဖက်ဝင်အပေါငျးတို့သအကြံပြုလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်ကောင်းမွန်စွာရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပြီး Hydroponic ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်ပေါက်ဖွားကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ပဲ၊ ဒါကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရယူလိုက်ပါ။
သင်၏ဥယျာဉ်ကိုသဘာဝနေရောင်ရရှိနိုင်သမျှများသောနေရာတွင်ထားပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့, သင်တစ်နေ့အနည်းဆုံးခြောက်နာရီရတဲ့ရဲ့wantရိယာချင်တယ်။ ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောသင့်အိမ်တွင်အစက်အပြောက်တစ်ခုကိုသင်မတွေ့ရှိနိုင်ပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ထားသောမီးထွန်းရန်စဉ်းစားရန်လိုပေမည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမီးချောင်း (CFL) သည်ဤအပင်များအတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလိမ့်မည်။ သင်၏အပင်များသည်တစ်နေ့လျှင်ခြောက်နာရီထက်နည်းသောအလင်းရောင်ရရှိရန်သေချာစေပြီး၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤအလင်းများစွာကိုသဘာဝမရရှိနိုင်ပါကဖြည့်စွက်ပါ။
သင်၏ Hydroponic ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ရမှာကရေကိုသင့်တော်တဲ့အဆင့်မှာထားဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်အတွက် pH ကိုရုံနှင့်ရေပမာဏကျဆင်းချိန်တွင်လက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက်အာဟာရဓာတ်၏ဂါလံအနည်းငယ်ကိုရောမွှေပါ။
သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရိတ်သိမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် FloraGro ကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းသစ်ပင်များဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့သည်ပန်းပွင့်များကိုထုတ်ပစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်“ bolt” စတင်ပါကသင်ဤပန်းများကိုချွတ်ပြီး ဆက်၍ ကြီးထွားစေသင့်သည်။ ထိုအပင်များသည်ပန်းပွင့်များကိုထုတ်လိုက်သည်နှင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏အရသာအချို့ကိုဆုံးရှုံးလေ့ရှိသဖြင့်ပန်းများကိုညှပ်ပြီးအမြဲရိတ်သိမ်းပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး Hydroponics လမ်းညွှန်ကိုထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပြည့်စေသည့်မိုးလုံလေလုံပျိုးပင်ဥယျာဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုအချို့ကိုအသုံးပြုမည်မျှော်လင့်ပါသည်။
အပင်ပေါ်မှာသေးငယ်တဲ့အဖြူ bug တွေဘာတွေလဲ